मृत्युदण्डको दृष्य हेर्न जाने साक्षीको अनुभव यस्तो छ
बुधबार, ३० चैत, २०७३ मा प्रकाशित,
काठमाडौं, चैत ३० । कसैको मृत्युको क्षण तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ ? अर्काको मृत्यु हेर्न चाहने मानिस पनि हुन्छन् ? प्रश्न अनौठो लाग्न सक्छ । तर कयौं यस्ता देश छन्, जहाँ कानुनअनुसार दिइने मृत्युदण्डमा केही खास मानिसलाई साक्षीका रुपमा सहभागी गराइन्छ ।
टेरेसा क्लार्क र उनका पति लेरी क्लार्क यस्ता दम्पत्ति हुन् जो केही वर्ष यता कयौं अपराधीलाई दिइएको मृत्युदण्डका साक्षी बसेका छन् । अर्थात् उनीहरुले फाँसी दिइएको दृष्यलाई साक्षीका रुपमा हेरेका छन् ।
लेरी क्लार्कले पहिलो पटक फाँसीको सजायँ एक्लै गएर हेरेका थिए तर फर्किएपछि उनले पत्नी टेरेसालाई पनि त्यस्तो दृष्य हेर्न प्रोत्साहित गरे । उनले भने, ‘वास्तवमै फाँसी हेर्न लायक चीज रहेछ ।’
टेरेसाले सन् १९९८ मा पहिलो पटक फाँसी हेरेकी थिइन् । डगलस बुकानन जुनियर नाम गरेका एक अपराधीलाई आफ्नै पिता, सौतेनी आमा र सौतेनी दाजुभाइको हत्या कसुरमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
रहरले होइन, कानुनी आवश्यकता पुरा गर्न हेर्छन् फाँसी
टेरेसा र लेरीजस्ता मानिस फाँसी दिइएको दृष्य हेर्न रहरले जाँदैनन् । उनीहरु कानुनी आवश्यकता पुरा गर्नका लागि त्यस्ता दृष्य हेर्न जाने गर्दछन् । अमेरिकाको केही राज्यमा कानुन अनुसार कसैलाई दिइने फाँसीमा आम नागरिक पनि साक्षीका रुपमा सहभागी हुन अनिवार्य छ । उनीहरुको उपस्थितिविना फाँसी दिन मिल्दैन ।
तर फाँसी दिएको दृष्य हेर्ने मानिस हम्मेसी पाइँदैन । किनकि त्यस्तो दृष्य जोकोहीले हेर्न सक्दैन ।
यसरी दिइन्छ फाँसी
टेरेसाका अनुसार बुकाननलाई फाँसी दिने दिन उनी त्यो दृष्य हेर्न जेल पुगिन् । एउटा कोठामा केहीबेर बसेपछि उनलाई फाँसी दिने स्थानमा लगियो । ‘कोठामा तेज प्रकाश थियो, एउटा ठूलो झ्याल थियो । पर्दा हटाइएपछि बुकाननलाई ल्याइयो,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार बुकाननलाई सोधियो– ‘अन्तिम समयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?’
जवाफमा बुकाननले भन्यो– ‘यात्रा सुरु गर । म जानका लागि तयार छु ।’
टेरेसाका अनुसार फाँसी दिनुअघि कैदीले दर्शक बसेको ठाउँतिर हेर्दछ । ‘अनौठो अनुभव हुन्छ, जब मर्न लागेको मान्छेले तपाई तिर घुरेर हेर्छ,’ उनले भनिन् ।
मृत्युदण्ड हेरेपछि आफूमा परेको प्रभाव स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘मृत्युदण्डको दृष्य हेरेर फर्किएपछि आफू ट्राफिक लाइटमा रोकिएको समयमा पनि मोटरको झ्यालबाहिर उसैको अनुहार झल्झली आउँदो रहेछ ।’
उनका अनुसार फाँसी दिइएपछि चिकित्सकले कैदीलाई मृत घोषित गर्दछन् र साक्षीहरुलाई धन्यवाद दिइन्छ ।
केही अघि अर्कान्सस राज्यको न्याय विभागले अपील गर्दै फाँसी सुनिश्चित गर्नका लागि साक्षीको कमी भएको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई साक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको थियो । सो अपीलपछि केहीले साक्षी बस्न इच्छा जनाएका छन् । उनीहरुले कानुनको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि आफूहरु साक्षी बस्न राजी भएको जनाएका छन् ।
राज्यको नियमअनुसार एउटा फाँसीमा कम्तीमा ६ सम्मानित नागरिकको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । उनीहरुले फाँसी सही तरिकाले दिइएको छ वा छैन भनेर साक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । (एजेन्सी)